Shaqooyinka Bankiga ee Dubai - Ka dalbo fursado xirfadeed ee UAE 🥇
Tag Shaqooyinka Banki ee Dubai
Shaqooyinka Dubai 2018 loogu talagalay Freshers
Published by Shirkadda Dubai City at November 30, 2017
Shaqooyinka Bangiga ee Dubai
Bangiyada Shaqooyinka Dubai, sababtan awgeed, shirkadeena waxay gacan ka geysaneysaa soo helida xornimo badan. Duruufahaas oo kale, waxaan jeclaan lahayn inaan kugu hagno sida aad shaqo uga dhex abuuri karto Bankiga gudaha suuqa Dubai. Intaa waxaa dheer, waxaan hadda xitaa caawineynaa waayo xirfad ku taala Bloomberg. Shirkadda Dubai City taasna waxay keentay in laga caawiyo dadka shaqo doonka ah ee ka soo jeeda India, Pakistan, Saudi Arabia iyo Qatar in ay u guuraan ujeedooyin shaqo. Marka loo eego ku biirista iyo bilaabida shaqo ee waaxda bangiyada waxay caan ku noqotay Bariga Dhexe.
Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha ugu qiimaha badan, xaaladahaas oo dhan, ayaa dhammaantood u baxaan si ay u gaaraan shuruudaha caalamiga ah ee ugu sarreeya si ay u helaan shaqaale cusub. Marka taasi dhacdo waaxyaha shaqaaleynta bankiyada shaqooyinka ugu fiican ee shaqo raadinta dadka ku nool UAE.
Si loo tilmaamo dabeecadda qaran ee adduunka oo dhan oo qaybta bangiga laga aasaasay dalka Isutagga Imaaraatka Emirates. Waan abuurnay fursadda ugu fiican ee xirfadeed halkaasoo ay tahay inaad u gudbiso resumeygaaga shaqooyinka bangiga ee Dubai. Caddaynta ugu badan ee khasab ku ah shaqada baanka ayaa ah inay bixiyaan xaalado sii kordhaya. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo cabashada caqliga ee waaxda bangiga iyo wadaagista ganacsi aqoon. Guud ahaan anshaxa hadalka gaar ahaan qofka ganacsiga koboca xirfad shaqo.
Ka saraysa dhammaan shirkadaheena hadda ka caawinta dadka yaryar ee waayeelka xirfad-yaqaannada intooda badan laga bilaabo Aasiya oo dhisaysa shaqooyin cajiib ah Dubai. Ujeedada dib u dejinta dadka gudaha iyo dibeddaba. Dubai City barnaamijyada shaqo raadinta ee shirkaduhu waxay noqdaan kuwo aad u firfircoon ilaa 2016. Annaga oo tan tan maskaxda ku heyna, waxaan rajeyneynaa in shaqadeena raadinta raadinta ay kugu caawineyso isla markaana kugu saacideyno qaabkaaga Xirfadda Dubai Bangiga. Waxaa laga baqayaa iyada oo aan xitaa lahayn khibrad ku filan qeybta bangiga Waxaan awoodnaa inaan kaa caawinno inaad bedesho xirfad.
Ka fariisiga bangiga Dubai
Shirkadda Dubai City waxay aaminsan tahay inay xirfad cusub ku bilaabi doonto loo-shaqeeyaha doorashada. Xirfadaha ku jira bangiyada ayaa hubaal ah inay kaa caawiyaan inaad barbar dhigto farqiga buundada ee ka dhexeeya shaqooyinka mushaharka leh iyo shaqada caadiga ah. Sida xaqiiqda ah, shirkaddayada ayaa gacan ka geysan doonta helitaanka shaqooyin meesha aad joogtid iyo meesha aad rabto inaad tusaale ahaan u noqoto Dubai.
Inkastoo tani run tahay oo ka soo jeeda Saudi Arabia ilaa Dubai, Kuweyt iyo Hindiya waxay ku safraan adduunka oo dhan. Hadda waxaan ka duwan nahay waqtiyadii hore dadkuna waxay galeen shaqooyin bankiyo ah United Arab Emirates. Xaqiiq ahaan, kooxdeena waxay xaqiijisay in markii ay da 'yarta ka tageen dugsiga dhaqaalaha. Waxay helayaan shaqo heer-hooseedka bangiga ah Fursad kadibna shaqadooda bilaabaye. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Shirkadda Magaalada Dubai waxay sameysay xoogaa cilmi baaris ah.
Iyo booska koowaad ee haweenka uurka leh had iyo jeer waa lacag hayaha bangiga. Ujeeddooyinka ah in la dallaco muddooyin cusub oo qalin-jabiyay. Guud ahaan marka la hadlayo, horumarka laga gaadhayo kaaliyaha maareeyaha qaybta bangiga waxay qaadan doontaa dhawr sano. Xaaladahaas oo kale, iyadoo loo dallacsiinayo jagada maareeyaha Waqti qaado ku dhawaad ​​3-5 sano Magaalada Magaalada Dubai.
Shaqooyinka Bangiga ee Dubai ee Hindida
Xilligan la joogo wax badan ayaa jira Xirfadaha Gulf-ka ee Hindida dadka ajnebiga ah. Gaar ahaan kuwa oo khibrad wanaagsan u leh shaqooyinka Dubai ee MBA. Sanadihii soo dhaafay, musharaxiintu waxay mar walba is-weydiinayaan sida loo helo shaqooyinka bangiyada Dubai. Laakiin jawaabta ma fududa inaad maamusho. Inta badan booqdayaasha cusub ee adduunka oo idil. Ka fekerida tani waa hab aad lacagta u sameyn karto. Laakiin xaqiiqda dhabta ah ee dadka adduunka ee maareynaya inay mustaqbalka shaqada bilaabaan wershadaha bangiga. Iyadoo la sheegayo waa mid aad u faahfaahsan oo adag in la maareeyo fursadda. Xataa qof caqli leh.
Dhowr sano ka hor markii Bariga Dhexe ay soo boodday. Markay shaqooyinka cusubi u duulaan sida duufaanka oo taga Dubai iyo Abu Dhabi. Kuwa shaqo doonka ah ee caalamiga ah waxay u guureen Dubai. Gaar ahaan mashruuc cusub oo ka yimid Koonfur Afrika oo loogu talagalay shaqooyinka bannaan ee Dubai kaalay inaad noolaato Dabadeedna ugaadhsadeyaasha cusub waxay ka soo guureen waddankoodii una ambabaxeen Emirates. Laakiin dib-u-dhac ku yimid 2009. Markay dhalinyarada cusubi ka tegeen dalkoodii iyagoo wata iskuulo wanaagsan oo asal ahaan ah. Nidaamyada cusub iyo bangiyada ayaa laga sameeyay Bariga Dhexe.
Indian had iyo jeer waxay aaminsan yihiin haddii ay shaqo helaan waa inay noloshu ahaato. Tusaale ahaan qaar ka mid ah dadka horayba ugu noolaa UAE. Xaaladaas, Hindiya waxay ogtahay sida loo helo shaqo. Doorka ugu horeeya ee aad codsaneyso waa had iyo jeer laybereeriga bangiga ama madaxa fulinta. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaa laguu kiraysan karaa si dhakhso ah. Dhinaca dhinaca wanaagsan, waxaad hubaal ahaan u sii socon doontaa maamulaha kaaliyaha ee guriga dhexdiisa bangiga. Ama xitaa waxaad maareyn kartaa xirfaddaada mawaadiic heer sare ah. Dhinaca kale, waxaad sidoo kale kartaa isku day inaad hesho jagooyinka suuq-geynta ee Bangiga.
Horumarka xirfadeed ee bangiga
Isla mar ahaantaana, waaxda bangiyada ee Dubai waa dad badan dadka ka shaqeynaya dibadda UAE taariikhda. Noqo sida ugu wanaagsan, xirfadaha dhaqaalaha Muuqaal, ma aha wax ka badan shaqada adag ee la sameeyo. Dhamaantiin, waxaad shaqeyn doontaa saacado badan iyo maamulka dadweynaha inta badan kiisaska ma arkaan shaqada adag ee aad dhigayso. Iyadoo maskaxda lagu hayo, xirfadkiina wuxuu inta badan diirada saari doonaa horumarka Dubai. Laanta shaqooyinka iyo macaamiisha wajahaya doorka.
Si kale haddii loo dhigo, waxaad guud ahaan bilaabi doontaa sida lacag-bixiyaha bilawga ah ee hubaal ah. Ama waxaad noqon doontaa luckier badan oo aad bilowdo shaqo mustaqbalka adeegyada macaamiisha. Waxaa muhiim ah in la ogaado in uu noqonayo maamulaha koontada ama lataliyaha suuqyada ama xitaa maareeyaha kooxda waxay qaadan doontaa sanado badan oo 10 ah. Dhinaca xun, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loola macaamili karo ujeedada raadinta iyo ujeedada dalacsiinta. Markaana noqon doonta mid kufilan doorka cusub waxaad ubaahantahay inaad ogaatid sida looga iibiyo xirfadahaaga awooda CEO.
Inkastoo tani ay run tahay waxaa jira siyaabo dhowr ah sida loo kiraysto Dubai. Waxaa jira siyaabo badan oo horumar loogu sameyn karo waaxda bangiga. Laakiin shirkad kasta kuma koobna waxaad ku samayn doontaa horumar. Tusaale ahaan, Deutsche Bank's meel qorshayaasha ballaarinta mashruuca ee Bariga Dhexe iyo waddamada Khaliijka. Laakiin bangiyadii Bariga Dhexe waxay bilaabeen jaridda in kabadan shaqooyinka 250 caalami ahaan. Markaa waad ubaahantahay inaad aad uga taxadarto sida aad u dooratay wadada noloshaada ee guusha.
Helitaanka shaqo bangi ka shaqeysa magaalada Dubai
Tusaale ahaan mawaadiicda maareynta dhaqaalaha gaar ahaan shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay Hindiya. Si kale loo dhigo, si aad uhesho meel fiican waxaad ubaahantahay inaad la xiriirto dhaqaalo badan oo cusub qorayaasha adeega ee Dubai. Waxa ugu horeeya ee lagu xasuusinayo waa jagooyin aad u fara badan oo kaladuwan suuqa shaqada Bariga Dhexe. Waxa la yaab leh sida aad ku arki karto wararka suuqyada saamiyada ee magaalada Dubai oo sheegaya in suuqa shaqooyinka maaliyadeed uu si dhakhso ah u korayo. Gaar ahaan, loogu talagalay dadka ajnabiga ah iyo musharixiinta maxalliga ah ee raadinaya shaqooyinka bangi ee Dubai.
Xiriirka wuxuu fure u noqday guusha shaqadaada raadinta. Dhanka togan, jagooyinka laga heli karo Imaaraadku waa lataliye amaah. Intaa waxaa dheer la-taliyaha kaarka deynta, lataliyaha iibka da'da yar ayaa badanaa laga heli karaa Dubai. Xaaladahaas awgood, waaxyo badan oo ka mid ah Imaaraadka Carabta, iyo sidoo kale badeecadaha adeegyada caymiska la xiriira, ayaa hadda ku biiray warshadaha bangiyada gaar ahaan shaqooyinka 2018.
Qodob kale oo muhiim ah ayaa dardar geliyay shaqo doonka sidii ay ugu gudbi lahaayeen xirfadaha xilligan xaadirka ah ee Magaalada Dubai. Guud ahaan marka laga hadlayo, waa tusaha shaqooyinka bangi ee ka jira Dubai. Taas oo aadan ku heli karin meel kale oo adduunka ah oo bixiya lacag-bixinno canshuur-dhaaf ah. Iyo mustaqbalka fog ee $ 100k mushaharka iyo gunooyinka ay tahay sheeko qurux badan oo aan dhammaad lahayn oo aan ahayn UAE. U raadso shaqooyinka Dubai Loogu talagalay banki Macaamiil, bangiyo ganacsi, iyo sidoo kale maal-gashiga bangiyada. Iyaga oo wada jir ah u kaabaya ilaha aadanaha, suuq gayn dheer iyo xiriirka bulshada shaqooyinka Dubai. Intaa waxaa dheer shaqooyinka xisaabaadka ee Dubai, maamul iyo wixii lamid ah, shaqooyinka IT-ga hada dhamaantood waxay ciyaaraan qayb iyo qeyb qeybta ka ah socodsiinta bangi mashquul badan oo ku yaal UAE. Dhanka kale, ma ahan gebi ahaanba bangiyo shaqaalaha ku sugan Imaaraadka Carabta leeyihiin doorar caadi ah oo soo wajihi macaamiil ah.
Ka shaqeynta qaybta bangiga ee Dubai
Muhiim u ah in la ogaado taas shaqaalaha maalgashiga ee Dubai ayaa si adag u shaqaynaya. Isku soo wada duuboo, waa inaad raadsataa waqti shaqo qiyaastii saacadaha 48 usbuucii. Sababtoo ah marar badan waa jawi walaac badan in la shaqeeyo oo waxaad u baahan tahay inaad sii wado. Qodob kale oo muhiim ah oo ka shaqeynaya Bariga Dhexe waaxda bangiyada. Qeybta ugu muhiimsan ee Bariga Dhexe ee Maalgeliyuhu wuxuu ku yaryahay fursada ugu weyn ee xirfadeed ee adduunka maaliyadeed. Khamiis iyo Jimco sida lagu xusay maalmo dhaqameed oo ka baxsan Bariga Dhexe. Laakiin waqti ka waqti waxay ku xiran tahay laanta tani waxay hoos u dhigtay saacadaha ganacsiga adduunka. Ilaa waqtigan xaadirka ah, maareeyaha bangiyada ayaa isbeddelaya ilaa sadex maalmood asbuucii, bangiyo kale oo badan ayaa soo raacay tusaalaha.
Deegaanka shaqada ee bangiga waa mid tartan badan. Waxaa jira qurbo-joog aad u badan oo caalami ah oo ka shaqeeya qaybta bangiyada. Tusaale cusub Shaqaale Pakistani ah oo jooga Imaaraadka Carabta. Had iyo jeer la tartamo Hindiya kale iyo qurba joogta Koonfur Afrikaanka ah. Sababta oo ah run marka aad ka heli karto shaqo bixiye ku habboon gudaha UAE. Waa sida inaad ku guuleysato bakhtiyaa-nasiibka. Waxaad sameyn doontaa lacag ka badan intaad xitaa qiyaasi karto.
Sida Loo Helo Shaqooyinka Bangiga ee Dubai
Inta badan shaqaalaha bangiga Dubai. Jimco iyo Sabtida waa in loo daweeyaa maalmo fasax ah. Laakiin si kooban, bangiyada badankoodu waa si joogto ah u shaqaaleysiiya Bariga Dhexe wali waxay leeyihiin 50% ee khamiista iyo maalinta Jimcaha oo dhan. Ilaa iyo hada, wali waxaa jira sideed saacadood maalintii. Saacaduhu waa saacad walba daacadna u ahaada maareynta iyo jagooyinka maamulka sare laakiin si lama filaan ah waxaas oo dhan waxay ku xirnaan doonaan booska aad hada ka shaqeyso Bangiga. Laakiin aan ka hor tagno, dhinaca xun ee maareeyayaasha mushaharka qaata ee fursadaha shaqooyinka maaliyadeed waxay u baahan doonaan 24 / 7 wakhtiga shaqada. Xaaladahaas oo kale, maareeye bangi ayaa jadwal u sameyn kara waqtiga saxda ah ee adiga shaqaalahu u baahan tahay inaad maamusho. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, marwalba waad awood kartaa isticmaal telefoonkaaga si aad u hesho shaqo. Qaabkan ayaa si fudud u fududaan doona gaar ahaan Imaaraadka.
Aad ayey muhiim u tahay in la ogaado Shaqooyinka internetka ee Dubai in haddii, tusaale ahaan, aad ka tagto shaqadaada adigoon ku siin ogeysiin sax ah. Ama xataa xitaa waxaad ka fili doontaa shaqadaada bangiga ama ganacsiga maaliyadeed. Waxaa jira calaamad saxan oo ku saabsan faylashaada xitaa haddii waxaad isku daydaa inaad shaqo ka hesho hudheel. Sidoo kale xitaa ma isku dayi doontid inaad shaqo ku hesho doorka la midka ah ee suurtagal ah in aan dib u bilawdo maaliyadda ee Imaaraadka Carabta. Falanqaynta kama dambaysta ah, waa inaad ogaataa in heshiiskaaga shaqada caadiga ah ee loogu talagalay shaqooyinka bangiyada ee Dubai sheeg inaadan ka shaqayn karin hay'ad maaliyadeed oo la xidhiidha ugu yaraan 12 illaa bilaha 24.
Nidaamka bangiyada gacanka
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ka ogtahay wadamada Khaliijka. Miyuu yahay nidaam bangiyeed iyo sida dhammaan waxyaalahan u shaqeeyaan. Tusaale ahaan, haddii aad diyaar u tahay inaad ka shaqeyso UAE. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ogtahay qawaaniinta gudaha UAE. Mid ka mid ah diidmada ayaa ah inaad ubaahantahay inaad had iyo jeer haysatid maqaamka saxda ah ee Dubai. Tusaale ahaan markii aad bilowdo inaad ka qaadaneysid dhibcaha bangiga. Waxaad ubaahantahay inaad si buuxda u hubiso inaad awood u bixin doonto inaad deyntaada gabi ahaanba iska bixisid.
Nidaamka bangiga aad ayuu uga duwan yahay gacanka. Waayo tusaale ahaan Imaaraadka Carabta. Waxaad ubaahantahay inaad akoon bangi had iyo jeer kujirto tirada saxda ah. Ma haysan kartid lacag-uruurin aan la qorsheyn. Sababta oo ah waxaa laga yaabaa inaad xabsi gasho haddii aadan si buuxda u bixin.
Nidaamka banki ayaa aad ugu wanaagsan Qadar iyo Kuweyt, gaar ahaan adeegsadayaasha muddada dheer. Wadamadan, waxaad kuheli kartaa natiijo wanaagsan oo amaah ah amaahda guryaha. Hadaad rabto inaad raadiso a Shaqada Dubai. Waa in aad gMaanta fursadaada riyadaada. Oo Resume Resume shirkadaha bangiga ugu koraya ee ku yaala Dunida!
Shirkadaha ka shaqeeya Bankiga Bankiga
Waxaan bixineynaa liis dhamaystiran shirkadaha bangiyada inay ka shaqeeyaan Dubai. Dhamaanteen waan ognahay in magaalada Dubai ay siiso bangiyada jagooyinka loogu talagalay duulimaadyada cusub. Iyada oo leh dhowr shirkadood iyo habka saxda ah waa macquul. Intaa waxaa dheer, xirfadaha maalgashiga bangi oo la-taliyayaal bangi oo shaqsiyadeed ah oo aad heli karto bangiyada UAE. Waxaa had iyo jeer jira suurtagalnimada inaadan helin qancin ku filan intaad ku gudajirto shaqo raadinta shaqada bangiga. Laakiin waxaad ka dhex heli kartaa meheraddaada baanka haddii aad baadi goob ugu jirto gaar ahaan Bariga Dhexe. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shirkadaheena ayaa maamusha loogu talagalay meelaha ugu fiican waa inaad codsataa shaqo.
Shirkadaha maxaliga ah ee shirkadaha caalamiga ah. Hadda waxaad bilaabi kartaa istaraatiijigaaga suuqyada maaliyadeed. Shirkaddayadu waxay qaadatay hal tallaabo oo dheeraad ah oo ku saabsan fursadahaaga xirfadeed ee cusub. Oo annaguna waannu abuurnay kooxo shaqooyin badan oo aad shaqo ka heli karto. Iskuday inaad raadiso meheradda maaliyadeed ee ugu wanaagsan khibradaada. Waxaadna eegtaa shirkadaha ay mudan yihiin inay helaan oo ku lug yeeshaan Ujeedada khibrad shaqo cusub Bariga Dhexe. Bal eeg waxa kugu habboon adiga. Iyo Codso shaqo xirfadeed oo cusub oo ku taal Imaaraadka Carabta.
Shaqooyinka ku jira Emirates NBD
Shirkadan waxay siisaa adeeg khadka tooska ah macaamiisheeda. Emirates NBD waxay kaloo bixisaa shaqooyin banaan HR iyo Head Office. Dhanka kale, dhowr fursado shaqo loogu talagalay oo leh khibrad hoose ayaa la bixin doonaa. Sidaas oo kale dad badan ayaa isla garanay maamulayaasha cusub oo kaliya u dhaqaaqaya Dubai. Keliya shaqooyinka shirkadan oo ka socda UAE.
Emirates NBD First off, waxay jecel yihiin macaamiishooda gaarka ah. Ururkani xitaa wuxuu dirayaa warqad mahadsanid ah oo aad macaamil ka tahay Emirates NBD. Maamulka sare ayaa jecel inay maqlaan dhammaan macluumaadka faahfaahsan iyo qormooyinka talooyinka ah. Waxaa intaa dheer, ka caawinta dadka kale fikradaha iyo fikradaha si ay ganacsiga uga dhigaan mid ka sii wanaagsan. Shirkadani waxay had iyo jeer weydiisataa inay is ixtiraamto midba midka kale. Shaqaalaha cusub had iyo jeer waafajisaa dhammaan xeerarka, shuruudaha, iyo siyaasadaha ka dhex jira Bariga Dhexe. Tani waa sababta shirkadan ay ugu fiican tahay shaqooyinka bangi ee ka jira Dubai.
Xirfadda Emirates Banking wuxuu ku siinayaa fursado badan oo shaqo oo Dubai ah. Dhaliilayaal dirista waraaqaha NBD oo noqday shirkadda ugu badan ee lagula taliyay UAE-da cusub ee raadinaya soo-booqdayaasha shaqada. Emirates NBD saacado shaqo ku habboon qaab nololeed qurbo-joog ah.
Qaar ka mid ah shaqooyinka shirkadani waxaa ka mid ah bangiyada waji ka waji caawimaadda adeegga macaamiisha. Waxaa intaa dheer, waxaad sidoo kale ka hubin kartaa jagada sida Maamulaha Dukaamada Dijital ah. Waxaad haysan kartaa waddo xirfadeed oo wanaagsan oo ku saabsan dhammaan bangiyadaada aad u baahan tahay shirkadan. Sidoo kale waa u qalantaa ka dalbo dhowr fursado shaqo oo kale shirkaddan UAE.
Xirfadaha gudaha UAE iyo HSBC
Bangi kale ayaan ku talineynaa shaqadu waa HSBC. Shirkadan ayaa si ballaaran loo aqoonsaday loona dhisto sumcad caalami ah. HSBC noqdaan bangi caalami ah oo ugu weyn oo ka shaqeeya Bariga Dhexe. Iyo sidoo kale hadda u gudubtey Waqooyiga Afrika adoo guuleystay. Ka shaqeynta Dubai City, oo leh dhowr laamood oo HSBC ah waa fikrad wanaagsan oo aad u caqli badan. Sababtoo ah waxaad ujoogsan kartaa inaad ku noqotid maamulaha degaanka waqti gaaban bangigan.
Baankani waxa uu siinayaa fursad aad u wanaagsan oo ah heerka heerka dhexe ee ilaa Xafiiska Madaxa C-maamulayaasha oo leh adeegyo macaamiisha lacageed oo buuxa. Raadinta shaqaaleyn shirkaddan waa iyada oo loo marayo shabakad ku saabsan xafiisyada 300 ee dalalka 14. Dhab ahaan waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga shaqeeyo Bariga Dhexe.
Shirkadda ayaa shaqaaleysiisay in ka badan dadka 3,000 ee Imaaraadka Carabta. Isla mar ahaantaana, HSBC waxay xarun ku leedahay magaalada Dubai. Marka, run ahaantii, haddii aad waayo-aragnimo fiican u leedahay heerar aqoon sare ah. Dhab ahaantii, dalbo maanta oo isku day inaad qorto wareysi lala yeeshay mid ka mid ah wakiilada fulinta maamulka sare.
Bangiga Heerka Sare ee UAE
Waa hab lagu shaqeeyo Imaaraadka Carabta Bangiga Heerka Sare. Mid ka mid ah ugu fiican adeegga macaamiisha iyo ayaa lagu qiimeeyay bangiyada sare ee adduunka sidoo kale wuxuu lahaa qiimeynta sare ee majaladda Forbes. Ka mid ah bangiyada caalamiga ah ee ugu sareeya. Baanka heerka caadiga ah wuxuu ku dadaalaa inuu caawiyo dadka oo shaqaaleysto musharrax cusub sanad kasta. Bixinta bangigan oo la siiyay tirakoob sare ayaa ka caawiyay inay kordhiyaan dakhliga. Gaar ahaan si ay u caawiso ganacsade cusub iyo ganacsatada mustaqbalka ee Aasiya, Afrika, iyo Bariga Dhexe.
Raadinta shaqo cusub iyadoo shirkadani tahay farxad. Intaa waxaa dheer, shaqooyinka bangiyada ee Dubai ay aad ugu yaryihiin SCB oo ku yaala UAE. Shirkadu way ka badan tahay Shaqaalaha 86,000 ee suuqyada 62. Bixinta meel sare oo shaqaaleyn ah oo ku saabsan shirkadaha shaqaalaynta Khaliijka. Bangigaan wuxuu leeyahay wax kabadan 150-sano oo taarikh ah gudaha iyo dibada ganacsiga ganacsiga. Bangiga caadiga ah ee loo yaqaan 'charter bank' wuxuu ku kobciyaa ganacsigooda qaar ka mid ah gobollada ugu firfircoon adduunka. Tusaale Qatar, Kuwait iyo Saudi Arabia. Shirkaddu sidoo kale way caawinaysaa shirkadaha baabuurta si ay u shaqeeyaan Kasoo bax si kor loogu qaado warshadahaan gacanka.
Baankani maahan hal mar marar. Shirkaddu waxay ku qoran tahay Suuqa London Stock Stock, oo leh caasimad sarre. Sababtan awgeed, isbeddelada saamiyada Hong Kong waxay siiyaan abaalmarin lacageed oo yar. On dhinaca dhinaca wanaagsan haddii aad tahay qurba-joogta Asian kaasoo diyaar u ah inuu shaqeeyo caalamka. Waa inaad ka fiirsataa shirkadan cilmibaarista xirfadda wareysigaaga. Maadaama aysan ahayn kaliya kana shaqeeya Imaaraadka. Shirkaddu waxay ganacsi ka waddaa sidoo kale Bombay waxayna ganacsi ka sameyneysaa is-weydaarsiyada dalka ee Hindiya.
Bankiga Dhexe ee Imaaraadka Carabta
Waa shaqo rasmi ah waaxda bangiyada dowladda. Aynu ka bilow bogga internetka of Bankiga Dhexe ee Imaaraadka Carabta. Haddii aad tahay qof jecel xoojinta sinnaanta hab nololeedka ee suuqa shaqada iyo nolol maalmeedka, shaqaaleysiinta Govermen waa adiga. Dawlada Dubia iyo Abu Dhabi dhisaya buundada iyo Waxbarashada 2018 dhaqanka loo dhan yahay waa mid aad muhiim ugu ah dhaqanka carabiga.
Iyada oo leh Bangiga Dhexe ee Imaaraadka Carabta, waa laga yaabaa inaad raadso jagooyin sida maamulaha xogta iyo sidoo kale kormeeraha falanqaynta musuqmaasuqa. Inbadan oo ka mid ah howlaha gudaha bangiga dhexe. Waxaad ka heli kartaa maamuleyaal aqoon sare leh oo hawlagala ururkan. Abuurista howlaha warbixinta ee Bangiga Dhexe. Kadib bixintaas si toos ah u fuliya fuliyaasha dawlada UAE. Shirkaddani waxay sidoo kale si dhaw ula shaqaysaa Emirates Airline maamuleyaal.
Bangiga Dhexe wuxuu leeyahay mas'uuliyadda ugu weyn qaabaynta iyo hirgelinta maaliyadeed. Sidoo kale, qaab dhismeedka bangiyada ayaa si heer sare ah loo soocay oo keliya dadka khibradda saxda ah leh wuxuu ka shaqeyn karaa Dubai ama Abu Dhabi. Marka adiga bilaabid la shaqeynta shirkadan. Waajibaadkaagu wuxuu noqon doonaa hubaal sii kordhinaya dhaqaalaha qaran ee UAE. Mar walbana hubso in ergooyinkaaga shaqo ay si isku dheelitiran u yihiin shaqooyinka bangiyada ee Dubai.
Mashruuca Bank of UAE
Mid ka mid ah bangiga ugu wanaagsan ee macaamiisha ee Abu Dhabi. Fursadaha shaqo ee Mashreq had iyo jeer waxaa laga heli karaa khadka tooska ah. Shirkadda waxay hogaamineysaa arday badan oo cusub oo qalin jabiyay jagooyinka heerka sare. Iyaguna waa hada isagoo heerar xirfadeed heerkiisu kacsan yahay. Bangiga Mashreq wuxuu shaqaaleysiiyaa shaqsiyaad heysta fursado badan oo musharixiinta cusub ah. Shirkadda ayaa sidoo kale shaqaaleysiisa aqoonyahanno Caalami ah. Tusaale ahaan laga bilaabo Philipines iyo Koonfur Afrika.
Shirkadan ayaa ku dhawaad ​​boqol meelood oo cusub oo banaan. Dhammaantood way furanyihiin shaqooyinka cusub ee shaqo doonka ee suuqa caalamka. Fikradda xoogga ah ayaa ah inay soo jiidato qurba-joogta cusub ee adduunka oo dhan ah oo ay ka mid yihiin Pakistan iyo India, musharraxiinta shaqada. Duruufahaas jira, haddii aad raadineyso inaad ku kobciso waayo-aragnimadaada maaliyadeed ee aad ka kooban tahay xirfado cusub. Shaqooyinka bangi Mashreq, kiiskan, meesha ugu fiican ee laguugu shaqeeyo. Waqtigaaga ha dhumin oo iskuday inaad shaqooyinka bangi ee Dubai kula shaqeyso.
Shaqooyinka ADIB Bank
Meelfiican oo loogu talagalay musharixiinta cusub ee ka sarreysa Bariga Dhexe. Dabcan, waa ADIB meesha aad ka bilaabi karto shaqooyin dhowr meelood. Bangiga ADIB ma ahan oo keliya hay'ad maaliyadeed oo lacageed. Maamulka shirkaddaas waxaa ka go'an inay noqoto mas'uul shirkadeed mas'uul ah. Gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga. Shirkaddu waxay abuurtaa jagooyin ka bannaan gudaha laamaha iyo waaxaha IT-ga. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad taqaanid sida loo sameeyo waxaaga shaqo google sida maamulaha IT-ga waxaad ku riyoon kartaa fursada ADIB.
Xirfadda bangigaaga waxaad ku bilaabi kartaa qalinjabin iyo arday. Baankani wuxuu leeyahay badanaa barnaamijyada loogu talagalay shaqsiyaadka cusub ee UAE. Dhanka kale, haddii aad tahay qof khibrad leh oo khibrad leh oo raadinaya boosas badan oo ganacsi. Waxa kale oo aad dalban kartaa dhowr waayeel maareynta shaqooyinka. Laamaha bangigan waxay ku lahaayeen joogitaan xoog leh dalal badan oo khaliijka ah. ADIB bank caawin shirkadaha cusub iyo kuwa hadda jira ee Dubai. Maareeyayaasha ku jira machadkan maalgelinta mashaariicda cusub iyo maareynta macaamiisha jiran.
Haddii aad tahay a Shaqaale dalxiis oo caalami ah oo raadinaya shaqo. Ama waxaad raadineysaa inaad tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ku qabsato UAE. Xitaa waxaad noqon kartaa qalin jabin Dubai, laakiin waad isweydiin kartaa ku bilaw xirfaddaada bangiga ADIB. Shirkaddan maaliyadeed waxay leedahay fursado shaqo oo badan adiga. Shirkadda waxay leedahay fursado ballaaran oo dhiirrigelin ah iyo fursado cusub oo ka jira Dubai. Dhinaca taban, badiyaa xulashooyinka ayaa si dhakhso leh ula yimaada ururkan sii koraya. Laakiin suuqa dhaqaalaha adduunka. Markaa ku talin mayno shaqaalaha maxalliga ah si ay u bilaabaan kicinta shaqooyinka bangi ee Dubai.
Ka shaqeeya Bankiga Islaamiga Dubai
Mid ka mid ah bangiga ugu wanaagsan musharraxiinta muslimiinta ee Bariga Dhexe. Hadaad tahay raadsanaya shaqo wanaagsan oo ku taal Dubai ama Abu Dhabi. Waa inaad ogaataa in Bangiga Islaamiga uu hadda shaqaaleysiinayo UAE. Guud ahaan hadaan daneyno inaad shaqo dheer kahesho UAE. Waa inaad ku biirtaa Dubai Islamic Bank, kooxda maareynta. Ururkani wuxuu hormuud ka noqday warshadaha maaliyadda Islaamka. Marka la eego qodobbadaas, iyagu waa leeyihiin Mashruucyo la yaab leh oo loogu talagalay musharraxiinta cusub. Dhab ahaan, dib u cusbooneysii cusbooneysiintaada ee warqadda daboolka ah ee bangiga Islaamiga ah ee Dubai.
Mid ka mid ah dhinacyada wanaagsan waa in Dubai Islamic Bank la aasaasay 1975. Marka safka hore, waxaad filan kartaa qaab dhisme shaqo oo waqti-dheer. Murashaxiinta cusub ee leh aragti cad iyo fikir macquul ah waa inay tixgeliyaan Dubai Islamic Bank. Dhinaca taban, qof kasta maahan. Gaar ahaan qof muslim ah oo bixin kara adeegyada bangiga iyo adeegyada maaliyadeed sida ku cad mabaadi'da Shareecada Islaamka. Markaa baankaani wuu badanyahay oqalin loogu talagalay Bakistaan, Sacuudiga, Qatar iyo guud ahaan ka hadlida Bariga Dhexe.
Waa in la xusuustaa in Bankiga Islaamiga Dubai. Dhab ahaan, waxay heleen sumcad ganacsi oo ah shaqo-bixiye sare oo ka mid ah dadka shaqo doonka ah ee Bariga Dhexe gaar ahaan xirfadaha baananka ee Dubai. Sababta oo ah qiyamka asaasiga ah iyo ujeedka ayaa ah in la taageero dhammaan shaqaalaha ganacsiga. Intaa waxaa dheer, agaasimeyaasha maareynta sare ee isku dayaya inay sameyaan bangigan mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan GCC.
Dubai Islamic Sharia Banking Jobs in Dubai
Murashaxiinta cusub ee leh aqoontooda MBA ee ku koraya waaxyaha shirkadda. Haddii aad tahay mid ka mid ah oo raadineysa inaad gaarto heerka ugu fiican ee adeegga macaamiisha ee Imaaraatka. Gacantaada kor u qaad dalbo boos banaan una soo bandhigaan waxqabad horumarineed oo cusub oo ku saabsan Shareecada Islaamka. Bangiga Islaamiga ah ee Dubai ayaa si hubaal ah u siinaya shaqooyin bangi oo ku sugan Dubai heerka ugu sarreeya.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan aqoon fiican u lahayn. Wali waad heysataa fursado ah oo ku saabsan mustaqbalka riyadiisa shirkadan. Sababtoo ah Dubai Islamic Bank waxay siisaa barnaamijyo kaladuwan xirfadlayaal karti leh. Inaad reer heshaan adiga oo sameysanaya qofkasta waxay bixisaa hormarin xirfadeed oo joogto ah. Kaliya inaad ka caawiso xubnaha qoyskaaga inay ka helaan shaqooyinka bangi ee Dubai. Iyo shirkadani waxay ku siineysaa fursad aad ku shaqeysid mudo dheer. Shaqaale kasta oo cusub ama duug ah wuxuu leeyahay fursad u gaar ah oo ay ku sii horumariyaan xirfadleyaal dheeri ah.
Bangiga Ganacsiga ee Dubai
Bangiga Qoyska ee Dubai, si aad uga mid noqotid qoyskaaga CBD waxaad u baahan tahay in dib loo helo. Shirkadu maahan heshiis weyn oo loogu talagalay macaamiisha caalamiga ah ee raadineysa musharixiinta. Haddii aad hore u soo guuray shaqooyinka bangiga ee Dubai. Waa inaad hubaal ka dhigtaa meelaha banaan ee bangiga ganacsiga ee Dubai. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican meel aad shaqo ku hesho sida maamulaha kooxda ama maareeyaha iibka. Sababtoo ah ka soo horjeeda shirkadaha waaweyn ee bangiyada. Dhab ahaan, waxaad yareyn kartaa shaqada oo aad wax badan ka baran kartaa.
CBD waxay ka bilaabatay 1969 waxayna si habsami leh u maareeysaa illaa hadda iyadoo la siinayo shaqooyin bangi oo ku yaal Dubai. Waxaana maalgeliyey amarkii Amri ee uu soo saaray Rashiid Bin Saciid Al Maktoum. In ka badan shirkada sanadkaan wax badan ayaa kortay, laakiin ilaa iyo hada waa ay leeyihiin 35th booska qiimeynta iyadoo la xayiray waaxaha bangiyada ee Imaaraadka Carabta. Iyada oo qayb ka ah qorshaheeda ballaarinta ee Khaliijka iyo Bariga Dhexe. CBD waxay bilowday inay u dhaqaaqdo qaybaha ganacsiga cusub. Midkood wuxuu ahaa bangiyada tafaariiqda iyo shirkadda SME oo leh maalgalinta iyo bangiyada Islaamka. Guud ahaan marka la hadlayo, waxay mudan tahay in la dabaqo hadaad deegaan tahay oo aad degtay Dubia si aad u hesho xirfad dawladeed.
Xirfadda RAKBANK ee Dubai
Shirkada ugu sareysa ee maxaliga ah ee loo shaqeeyo ee Dubai. Marka hore, waxaad heli kartaa fursado cajiib leh RakBank. Shirkadu waxay weerartay suuqa maxaliga ah ee 2018 iyada oo xayaysiisyo. Mid ka mid ah badeecadaha ugu wanaagsan ee lagu xayeysiiyo qaybaha bangiyada. RAKBANK ayaa maareynaya hawl maalmeedka maalinta. Gaar ahaan qeybaha magaalada Dubai. Maareynta shirkaddan oo gaarsiisan heerarka caalamiga ah iyo heer qaran ee bangiga.
Dhanka kale, shirkadani waxay leedahay howsha wareysiga xoogan. Marka helitaanka shaqo laga helo iyaga maahan heshiis fudud. Waxaad ubaahantahay inaad gudubtid caqli caqli iyo wadaagidda khibradaada markaad wareysi ku siiso maamulaha kireystaha. Baankani wuxuu u fiican yahay qof kasta oo ka socda maxalliga ah codsadayaasha caalamiga ah ee 2018. Bangiga ayaa sidoo kale loo yaqaan Bangiga Qaranka ee Ras Al Khaimah. Sidaa darteed, shaqooyinka bangiyada ee Dubai oo la maamuli karo RakBank.
Xirfadda RakBank ayaa maalin walba culeys kugu noqon doonta. Laga soo bilaabo maamulka hawlgalka gudaha adeegyada maaliyadeed ee tafaariiqda. Ilaa hawlo ganacsi oo yar yar iyo kuwo dhexdhexaad ah. Illaa iyo hadda, bangiga ku yaal Imaaraadka wuxuu si aad ah u korayaa. Maalin kasta oo u adeegaysa macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira ee 720,000. Howlgalka Rak-Bank ee 1976. Waa sidaas in ka badan waxaad filan karto marka laga hadlayo xagga dalacsiinta. Qaybta ugu badan, RakBank waa mid ka mid ah hay'adihii maaliyadda ee ugu da'da weynaa ee Dubai oo wali shaqaaleysiinaya. 2018 iyo 2019 waxay ku qiimeeysay mid ka mid ah xawaaraha ugu dhaqsaha badan uguna firfircoon. Laakiin waxay u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan xisaab hubinta, iyo xitaa Ernst Young wuxuu la kulmaa waqtiyo adag oo leh xisaabin.
Marka hore Abu Dhabi Bank
Cilmiga xirfadda ee waaxda bangiyada oo uu la yeeshay bangigii ugu horreeyay ee Abu Dhabi. The Fursadaha shaqo ee muwaaddiniinta UAE halkii ay ka bixi lahaayeen. Bangiga Abu Dhabi ee Kowaad wuxuu ku korayaa suuqyada maaliyadeed ee maxalliga ah. Bixinta jagooyin shaqo oo cusub oo loogu talagalay muwaadin UAE. Guud ahaan marka laga hadlayo, baanankani waa wax ku cusub marka loo eego kuwa kale ururada maaliyadeed ee Dubai iyo Abu Dhabi. Shirkadda ayaa ka baaraandegtay sannadihii 41 ee Dubai iyo Abu Dhabi.
Dhanka kale, la shaqeynta shirkaddan Abu Dhabi micno weyn ayey u leedahay maamulayaasha UAE. Tusaale ahaan, ka mid noqoshada koox ayaa sharaf weyn ku ah UAE. Ardayda si diiran u qalin jabisay karti iyo jaceyl shaqsiyadeed had iyo jeer iskudayaya inaad shaqo ka bilowdo FAB. Sababtoo ah haddii aad tahay qof maskax furan. Waxaad kula wadaagi kartaa aragtida diiradda ku saabsan yoolalka dhaqaalaha ee ururka dhexdiisa ah. Halka iyagoo ka wada shaqeynaya Dubai ama Abu Dhabi si ay u bixiyaan waayo-aragnimo macmiil oo weyn oo ka socda UAE.
Maskaxda ku hay markaad codsaneyso shaqooyinka bangiyada ee Dubai. Maareynta bangiga ayaa ka caawiya shaqaalahooda inay u qalmaan shahaadadooda. Ka caawinta inay gaaraan xarumo waxbarasho oo gaar ah. Sidoo kale, maamulka ayaa ka caawiya shaqaalaha cusub inay ka gudbaan tababarka iyo waxbarashada muhiimka ah. Sidaas, iyada oo aan loo eegin waxa uu yahay waxbarashadaa shirkadkan waxaad kor u qaadi kartaa heerarkaaga.
Baanka Islamic Emirates
Mucjisooyinka Islaamiga ah ee Emirates ee 2004. Guud ahaan, waa hay'ad maaliyadeed oo cusub. Helitaanka Bangiga Shaqada ee Dubai ururkan waa inuu noqdaa mid fudud. Sababtoo ah sida Dhamaanteen waan ognahay shirkadaha cusub inay jecel yihiin inay dhaqso u koraan. Gaar ahaan dhaqaalihii Dubai iyo xarumaha Abu Dhabi. Dhanka taban, shaqaalaha cusub ee Emirates Islamic Bank. Xaqiiqdii, waxaad u baahan doontaa inaad si adag uga shaqeyso sidii aad u gaarsiin lahayd heerarka ugu sarreeya ee adeegyada bangiyada. Sababtoo ah bangiyada sii kordhaya ayaa ah kii ka shaqeeya badi ee UAE.
Mar dhow ama goor dambe ayaa mashruuc cusub la imaan doona Emirates Islamic Bank. Marka musharax cusub marka la wareysanayo waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa loo baahan yahay. Baankani wuxuu si fiican u shaqeeyaa si waafaqsan heerarka ugu sareeya ee mabaadi'da Shareecada. Waxaa intaa dheer, dhaqanka Carabta waxaa si aad ah ugu xiran shirkadan maaliyadeed.
Mid ka mid ah habka ugu caqliga badan ee lagu bilaabo baankan. Xaqiiqdii waa inay lahaato booska adeegga macaamiisha. Waajibaadka jagadan waxaa ka mid ah inuu u soo bandhigo macaamiil fara badan oo alaabooyin ah macaamiishooda cusub iyo kuwa jiraba. Laakiin daqiiqad ayaa laguugu dalacsiin karaa oona kala guuri kartaa ka yimid shaqsi lataliye dhaqaale. Ka dibna caawiya ganacsatada yaryar ee ganacsatada ah iyo sidoo kale shirkadaha waaweyn. Si kor loogu qaado suuqa Emirate-ka. Bangiga Islaamiga ayaa ah doorashada saxda ah ee kuwa raadinaya heer sare ee hawlgalka maareynta xirfadda.
Shaqooyinka Banking ee Dubai ADCB
Qaab shaqsiyeed shaqaale kasta iyo caawinta dadka kale. ADCB Bank waa meel kufiican shaqada. Maamulka shirkadahan maaliyadeed waxay leeyihiin ujeedooyin u gaar ah. Isla mar ahaantaana, ADCB waxay sugaysaa Expo 2020. Bangigu wuxuu noqdaa oo ah tan ugu qiimaha badan Imaaraadka Carabta. Maamulka sare ayaa ku dhawaaqay in lagu abuuri doono ilaha ugu weyn ee maareeyayaasha deynta ee Abu Dhabi.
ADCB waxay ka hawl gashaa da'da dhismaha ugu horeeya waxaa lagu dejiyey 1985. Tan iyo markaas bangiga ayaa koray. Joogitaankuna wuxuu ahaa mid aad u qiimo badan oo ka mid ah Dowladda Imaaraadka. Baanka ayaa ka bilowday maalgelin wanaagsan. Isla mar ahaantaana si xoog leh kor ugu qaadaya inay la shaqeeyaan shirkadaha kale. Maareeyayaasha shaqaaleysiinta ee ADCB waxay leeyihiin hammaan xoog leh oo loogu talagalay shaqaaleynta musharixiinta Caalamiga ah. Cusub dadka ajnebiga ah waxaa loo ogol yahay inay CV-ga u diraan waaxda HR. Baankani waxa uu bixiyaa fursado badan xitaa haweeney u tartameysa.
Raadinta shaqooyinka bangi ee ka jira Dubai guud ahaan hay'addu dhib kuma ahan. Sababtoo ah kooxda maareynta ayaa aad u daneyneysa inay raacdo murashaxiinta cusub iyo buuxinta jagooyinka cusub ee gudaha. Si aad uga bilowdo bangigan Fursad shaqo waxaad u baahan tahay inaad ka dalbato goobta shaqada.
Soo gudbinta resumeygaaga xaqiiqdii waxay kuu suurto gelinaysaa inaad la shaqeyso saaxiibo cusub oo adduunka oo dhan ah. La shaqeynta ADCB waxay ku lug leedahay u adeegida macaamiisha ka timid Bariga Dhexe oo dhan. Sababtoo ah waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee ka shaqeeya baanka shaqada ee Dubai.
Boosaska bannaan ee Baanka ADCB
Tusaale ahaan, meelo badan oo banaan ayaa lagugu siin karaa goobta. Sababtoo ah shaqooyinka banki ee ADCB ee Dubai ayaa ku lug leh maareynta waajibaadyada dhammaan dhinacyada waaweyn ee hawlaha. Aynu bilowno adeegga macaamiisha aasaasiga ah. Markaas waxaad u guuri kartaa waaxda bangiyada ganacsiga iyo maalgashiga.
Ka dibna taageerada howlaha maamulka sare sida talinta ganacsiyada ganacsiga ee Dubai. Waxa kale oo aad ka heli kartaa shaqaale banaan. Ugu dambeyntiina, waxaad tegi kartaa tiknoolajiyada iyo suuq-geynta suuqa shaqada ee xafiisyada Dubai. Bangiga ADCB Maareynta laanta meelo badan oo ku yaal Abu Dhabi, Dubai, Sharjah iyo Al Ain.
Shaqada Bangiga Adduunka ee Noor
Shirkadda ku xigta oo ay tahay inaad u dirto CV-gaagu waa Noor Bank. Kii hore loo yaqaanay Bangiga Islaamiga ee Noor. Laanta ugu horaysay waxaa laga asaasay Janaayo 2008 magaalada Dubai. Tan iyo markaas si guul leh ugu koray Imaaraadka. Helitaanka shaqada waqti gaaban gudahooda waxaa suurtagal ah shirkadda Noor Bank.
Loo shaqeeyeha wuxuu si weyn u kordhay mudo gaaban. Noor Bank waxay bixisaa a UAE oo bixisa shaqooyin badan oo kala duwan. Tusaale ahaan, ka iibinta alaabada iyo adeegyada macaamiisha. Maareynta gundhig maal gashi macaamiisha hada jirta. Ka caawinta koritaanka cusub ganacsiga Dubai iyo abuurista warbixinno ku saabsan nidaamyada bangiyada cusub ee shirkadaha. Mid ka mid ah adeegyada ugu wanaagsan waa maaraynta hantida. Waxaad sidoo kale heli kartaa dalabyo shaqo sidii lataliye caymis. Intaa waxaa dheer, khasnadda, iyo khabiirka fulinta ganacsiga.
Shirkadda Noor Bank waxay leedahay 95 boqolkiiba oo Noor Investment Group ah. Dhinaca kale, boqolkiiba 5 waxay ka tirsan yihiin Hay'adda Milateriga Emirates. Laakiin dhinaca wanaagsan, waxaa sidoo kale jira dhibic dhibic ah oo ay leedahay hantiilayaal shakhsi ah. Iyo ganacsatada iyo sidoo kale shirkadaha UAE. Shaqooyinka bangiyada ee Dubai, bangiga Noor wuxuu leeyahay joogitaan heer sare ah oo ku yaala Imaaraadka Imaaraadka Carabta.
Xirfadda bangi ee Bankiga Carabta
Shirkadda xigta ee ay tahay inaad dirto Resume waa United Arab Bank. Shirkadan ayaa raadineysa inay shaqaaleysiiso kuwa fuliya awooda sare ee caalamiga ah. Duruufahaas jira, haddii aad tahay qof aqoon sare leh. Waad bilaabi kartaa la shaqeynta kalgacal in la maalgeliyo. Hubaashii oo laga soo noqdo shirkadda, United Arab Bank waxay bixisaa fursado toos ah. Hubaal fursado cusub ayaa lagu kicinayaa guriga. Iyada oo Baanka Carbeed waxaad horumarin kartaa xirfadahaaga kuna kora xirfad ahaan.
Shaqada Bangiga Al Hilal Bank
Mid ka mid ah bangiyada ugu cusub ee UAE. Shirkadan si sare looma qiimeeyo. Laakiin waxay noqon kartaa shirkadaada xigta meeshaad ka shaqeyso. Akoonka rasmiga ah ee websaydhka ayaa sheegaya in Al Hilal Bank uu shaqaaleysiinayo. Maamulaha laanta bangiga ayaa had iyo jeer iskudayaya inuu nidaamka bangiga ka dhigo mid sahlan. The fursado shaqo looma qorsheynin kuwa fuliya xirfadaha sare. Sidoo kale inaadan helin fursado badan oo xiiso leh. Laakiin wali bangigan oo bixiya shaqo. Marka intaad wali sii joogto shaqo hel. Isku day inaad run ka noqoto qiyamka islaamka. Qeybta ugu badan, Al Hilal Bank wuxuu ka bilowdaa 19th ee Juun 2008. In la soo koobo maalgashiga uu aasaasay Abu Dhabi Golaha Maalgashiga. Shirkaddan ayaa ka shaqeysa magaalada Abu Dhabi halkaas oo laantii ugu horreeyay laga maalgeliyey.
Xirfad ku jirta Bangiga Dambiyada ee Dambiyada ee Dubai
Runta oo ku saabsan bangiga ayaa ah in shirkadu ay tahay mid la maamuli karo horumarka Singapore. Taasina waa xog dhab ah ee adiga kugu habboon. Sababtoo ah Kobcin xoog leh ee baahidaada shaqooyinkaaga. Shirkado caalami ah ayaa ku lug lahaa. Shaqooyinka bangi ee ka jira Dubai waxay u baahan yihiin damin la yaab leh iyo suurtagalyo tiro badan. Inta badan shaqooyinka degdegga ah ee caalamiga ah ee suuqa shaqada ee Bariga Dhexe. Bangiga DBS ma ahan farxadda kaliya ee ifaysa. Laakiin aqoonta dhaqaale ayaa ah wadnaha shirkadan. Xaqiiqdiina, maamulka shirkadan ayaa garanaya waxa laga sameeyo macaamiisha cusub.
Guudmarka Shirkada DBS waa koox hogaamisa adeegyada maaliyadeed ee Aasiya. Maalin kasta shirkadani waxay shaqaaleysiisaa dad karti sare leh oo ku xeeran gacanka iyo Aasiya. Bangigaan Singapore ee Dubai wuxuu leeyahay in ka badan laamo 250 dhammaan suuqyada 17 adduunka. Dhinaca taban ee xaruntiisu tahay Singapor. Marka waxaa laga yaabaa inaysan sahlaneyn in lagu shaqaaleeyo jagada bangi ee C-heerka. Xaaladda ugu xun ee aad ku soo duuli karto waa Singapore. DBS Bank, mustaqbalka fog, waxay leedahay a joogitaanka sii kordhaya ee Imaaraadka Carabta.
Shirkadda ayaa heshay abaalmarino kala duwan. Tusaale ahaan bangiga ugu ammaansan ee isticmaala internetka ee Aasiya. Waxaa intaa dheer qiimeynta sare ee laga soo qaatay Maaliyadda Global lix sano oo isku xigta, laga bilaabo 2009 illaa 2014. Oo sidoo kale ahaa Waxaa loo aqoonsaday hogaankeeda gobolka Aaga Gacanka. Macluumaad dheeraad ah oo abaalmarin ah booqo boggooda halkaas oo aad ka heli karto shaqooyinka bangi ee Dubai.
Shirkadaha kale si ay u shaqeeyaan Bankiga
Waxaa jira shirkado badan oo ka shaqeeya khibradaha bangiga. Shirkadda Dubai City waxay had iyo jeer ku faantaa bixinta shaqooyinka. Gaar ahaan kuwa leh khibrad ku filan oo ay ugu shaqeyn karaan shirkadaha sida Bloomberg ama Ernest Young. Waxaa jira dhowr shirkadood oo kale oo ay tahay inaad booqato ka hor intaadan kudhicin bog. Fursado shaqo oo aan lahayn tiradooda ayaa had iyo jeer sugaya ciyaartoyda ugu adag suuqa. Xaaladdan oo kale markaad raadineyso shaqo waa goobahaaga dagaalka.
Uma baahnin inaan kugu qancino shaqooyinka ee Bloomberg. Shirkadaha waa-weyn ee la qiimeeyay ayaa si fiican looga yaqaan adduunka oo dhan. Sida la arki karo, shirkadda Bloomberg waa madaxa, hogaamiyaha macluumaadka aan la saadaalin karin. Shirkadan ayaa shaqeysa maalin walba ka sarreeyaan suuqa dhaqaalaha iyo bixinta xalal maaliyadeed oo tayo sare leh. Gaar ahaan macaamiisha jira. Mid ka mid ah adeegyada ugu waaweyn ee ay Bloomberg bixiso. Waa waqti-dhab ah iyo xog taariikhi ah ganacsiyada iyo khubarada maaliyadeed ee adduunka oo dhan.
Maareyn aad u adag maalin kasta. Ilaa iyo hadda shirkadda shaqeyneysa sida ugu dhaqsaha badan suuqa. Halka shirkadaha kale ee dhaqaalaha ee ilaaliya tayada iyo saxsanaanta Bloomberg ay durbaba ogyihiin natiijooyinka. Maareynta sare ee waaxda HR waxay u soo bandhigtaa kooxda ugu wanaagsan adduunka kooxdooda. Isku soo wada duuboo murashax kale oo cusub oo shirkadan sameysata iyo dib u soo nooleynta mustaqbalka suuqyada maaliyadeed ee adduunka oo dhan.
Waxaad ka qaban kartaa shaqo cajiib ah halkan. Fursadahayaga horumarinta xirfadeed waxay ku siin doonaan agab kasta oo aad u baahan tahay si aad u gaarto kartidaada buuxda laakiin adiga ayey ku saaran tahay inaad taas ku dhacdo.
Ka shaqee EY gudaha Imaaraadka Carabta
Guud ahaan ka hadlida shaqooyinka dhaqaale. Waa inaan ku darno EY liiska shirkadaha ugu sarreeya shaqada. Sababtoo ah ururkani waa hoggaamiye caalami ah oo dammaanad qaadaya sidoo kale cashuuraha, macaamil ganacsi. Iyo adeegyada latalinta adduunka ee ugufiican maalgashadayaasha. Ernst & Young oo leh in kabadan shaqaalaha 167,000 shaqaale caalami ah. Dhammaantood waxay ku mideysan yihiin wadaagga qiimaha aasaasiga ah ee maaliyadeed. Wadanka Isutagga Imaaraatka Carabta, shirkadaha cusub had iyo jeer waxay dhiirigeliyaan la taliyayaal cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah. Iyo EY dadka ka shaqeeya adduunka oo had iyo goorba samee wixii saxda ahaa. Tani waa sababta shirkadani si fiican uga yaqaanno Emirates. Waxay dhisaan is-beddel habboon iyo u-go'naanta adeegyada tayada maaliyadeed.
Gabagabaynta Xirfadaha Bankiga
Waxaan haysanaa rajo ah inaan haysanno Daboolida hagista faahfaahsan ee ugu weyn. Waxaan rajeyneynaa in lagu shaqaaleysiin doono shaqooyinka bangi ee ka jira Dubai. Markaad dalbatid dhammaan shabakadahaan. Xaqiiqdii waa inaad heshaa shaqo shaqo bangi. Ama dhinaca kale, ugu yaraan Macluumaad shaqo oo wanaagsan. Gaar ahaan baahiyaha cusub ee shaqaaleynta gudaha ee Dubai iyo Abu Dhabi. Kooxdayada ayaa leh rajo weyn oo ah inaad jeclaan doontid boosta. Waxaad kula wadaagi doontaa Facebook iyo Twitter si aad u caawiso dadka kale. Nasiib wacan Dalxiisayaasha Bariga Dhexe iyo shaqo doonka.